Xiddiga habeen dambe ku guuleysan doono laacibka sanadka ee Yurub oo lasii saadaaliyay – Gool FM
Xiddiga habeen dambe ku guuleysan doono laacibka sanadka ee Yurub oo lasii saadaaliyay
(Monaco) 28 Agoosto 2019. UEFA ayaa ku qaban doonta xaflad weyn ee si heersaro ah loo agaasimay fiidnimada habeen dambe ee khamiista ah magaalada Monaco ee dalka France, si loo sameeyo Isku aadka Tartanka ugu xiisaha badan horyaalada Yurub ee Champions League ee xili ciyaareedkan 2019/2020.
Waxaa la qorsheenayaa sidoo kale in lagu dhawaaqo guuleystaha abaal-marinta xiddiga sanadka ee Yurub fiidnimada habeen dambe ee khamiista ah, inta ay socoto xaflada UEFA ee ka dhici doonto magaalada Monaco ee dalka France.
Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ayaa horey u sheegay saddexda ciyaaryahan ee isugu soo haray abaal-marinta laacibka sanadka ee UEFA.
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo iyo Virgil van Dijk ayaana isugu soo haray, iyadoo habeen dambe lagu dhawaaqi doono guuleystaha abaal-marinta xiddiga sanadka ee UEFA.
Xafladan ayaa ka dhici doonta habeen dambe ee khamiista ah Magaalada Monaco ee dalka Faransiiska, gaar ahaan marka ay sacadu tahay 7:00 fiidnimo ee geeska Afrika.
Waxaa la saadaalinayaa in abaal-marintan ay si xoogan ugu dagaalami doonaan labada ciyaaryahan Lionel Messi iyo Virgil van Dijk, sababa la xiriira wax qabadkooda cajiibka ahaa ay ka sameeyeen xili ciyaareedkii tagay.
Koox ka dhisan dalka Spain oo Arsenal ka qaadanaysa xiddig muhiim ah ka hor kulanka wayn ee Tottenham Hotspur
“Pogba ka tag kooxda” – Farriimo cusub oo ka imanaya taageerayaasha Man United